မိဘမဲ့ကလေးကျောင်းသို့ … | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » မိဘမဲ့ကလေးကျောင်းသို့ …
Posted by မမလေး on May 14, 2011 in Creative Writing |9comments
အဲ့ဒီ အဖွဲ့အစည်းက တစ်နှစ်ကို နှစ်ခါသွားသွားပြီး မိဘမဲ့ကလေးကျောင်းမှာ စုပေါင်းအလှူ လှူပါတယ် … နေရာတော့မတူဘူးပေါ့ … စစတုန်းကတော့ ၁၂ ယောက်လောက်ပဲရှိတာ .. ခုဆိုရင် Express ကားကြီး တစ်စီး MB ကားလေးတစ်စီး နဲ့ လူတွေများလာပါပြီ … ပရဟိတ ကျောင်းပေါ့နော် … ခုလာမယ့် ၂၂ ရက် တနင်္ဂနွေနေ့ မနက် ၇း၀၀ လှည်းကူးမြို့က မိဘမဲ့ကလေးကျောင်းကိုသွားလှူမှာဖြစ်ပါတယ် … သမီးကတော့ ဒီနှစ်မှစ သိလို့ ဒီနှစ်မှ လိုက်သွားမှာပါ …. ဘုန်းကြီး ဆွမ်းကပ်မယ် … သူတို့ကို နေ့လည်စာကျွေးမယ် … ကျောင်းသုံး ပစည်း ( ချွန်စက် ၊ ခဲတံ ၊ ကျောင်းဝတ်စုံ တွေ) အစစ အရာရာပေါ့ ၊ အာဟာရကျွေးမယ် … ဆော့မယ် … နိဗာန်ဈေးပွဲလုပ်မယ်တဲ့ … တစ်ခါမှမရောက်ဖူးတော့ သေသေချာချာ မသိဘူး … ညနေ ၅ နာရီလောက်မှ ပြန်ရောက်မယ်တဲ့ … အဲ့ဒီကကလေးတွေ အရမ်းကို သနားဖို့ကောင်းတယ်တဲ့ … စိတ်ပါဝင်စားသူများ လိုက်ဖို့ စာရင်းပေးနိုင်ပါတယ် … အလှူငွေလည်းထည့်နိုင်ပါတယ် … အိမ်မှာ မ၀တ်ချင်တော့ တဲ့ အ၀တ်တွေ မသုံးဖြစ်တော့ တဲ့ပစည်းလေးတွေ၊ စာအုပ်လေးတွေ ခဲတံလေးတွေကို လည်း လှူနိုင်ပါတယ် .. အိမ်မှာ မသုံးဖြစ်တဲ့ ပစည်းလေးတွေစုပြီးယူသွားမယ် … ကိုယ်က မလိုလို့ တန်ဖိုးမရှိပေမယ့် သူတို့အတွက်ကတော့ တန်ဖိုးရှိရင် ရှိနေမှာပေါ့နော့် … စုရပ်ကတော့ မာလာမှတ်တိုင် နဲ့ … မြို့တော်ခန်းမ မှာပါ … တစ်ချို့ ကားနဲ့ မိဘမဲ့ကလေးတွေ အတွက်ဆိုပြီး အလှူခံကြတယ်လေ အကြံအဖန် လား အမှန်အကန်လား ဝေခွဲမရဖြစ်နေရတယ် … ခုက တစ်ကယ် အသေအချာကြီး သူတို့တွေလက်ထဲရောက်အောင် ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ သွားလှူမှာဖြစ်လို့ လုံးဝ စိတ်ချရပါတယ် ….
ကြိုတင်စာရင်းပေးစရာလိုလား။ သူတို့နဲ့ ဆက်သွယ်ရမယ့် ဖုံးနံပါတ်လေး၊ လိပ်စာလေး ပါပြောပေးရင် ပိုကောင်းတာပေ့ါ။
လှည်းကူးမြို့မှာ မိဘမဲ့ကျောင်းတွေအများကြီးရှိတာ ဘယ်ကျောင်းလဲမသိဘူးနော်။ ကျောင်းနေရာ သေချာလိပ်စာလေးသိရရင်ကောင်းမယ်….
အနာကြီးရောဂါသည်တွေရဲ့ သားသမီးတွေ နေတဲ့နေရာလား။ အဲဒီနေရာသွားဖို့ရှိလို့။
ဟုတ် …မနက်ဖြန်မှ ဖုန်းဆက်မေးပေးပါ့မယ် … သူက ဖိတ်စာတော့ပြတယ် သေသေချာချာမမှတ်လိုက်ဘူး … စာရင်းကတော့ ကြိုပေးရတယ် ဘာလို့လဲဆိုတော့ ကားက ငှားရဦးမှာမို့လို့ … မဟုတ်လို့ရှိရင် လူများပြီး ကားမဆံ့မှာစိုးလို့ တဲ့ … သေသေချာချာမေးပြီး ပြန်ပြောပြမယ်နော် …. နေရာကို …
ရန်ကုန်တိုင်း ၊ လှည်းကူးမြို့ ၊ ညောင်နှစ်ပင် သီးစုံစိုက်ပျိုးရေး အထူးဇုံ – ၂ တွင်ရှိသော ညောင်ကိုင်အေး လောကချမ်းသာ ပရဟိတကျောင်း ပါတဲ့ …
ထပ်သိချင်တာရှိရင် ထပ်မေးပြီး ပြန်ပြောပြပါမယ် နော် ……
ရန်ကုန်တိုင်းလှည်းကူးမြို့နယ် ညောင်နှစ်ပင်အထူးစီးပွါးရေးဇုံ(၂)တွင်ရှိသော ညောင်ကန်အေးလောကချမ်းသာပရဟိတကျောင်း တွင်ကျွန်တော်တို့အနေဖြင့် အာဟာရဒါန ၊ ပညာသင်စရိတ် ၊ ကျောင်းသုံးစာရေးကိရိယာ ၊ ကျောင်းဝတ်စုံများကိုသွားရောက်လှူဒါန်းမည်ဖြစ်ပါသည်